ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ ! – သုတရသ
ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ !
ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ ! ဒီနေ့ ဗားကရာလမ်း ဆန္ဒပြပွဲမှာမနက်တစ်ပိုင်းလုံးကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ လုပ်ကြတာက လူစုပြီး အော်မယ်။ ရဲတွေ ပြေးတက်လာရင် ပြေးမယ်။ ရဲတွေ ငြိမ်သွားရင် လူပြန်စုမယ်။ ဆက်အော်မယ်။ ဒါကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် လူထု ခံစစ် (defense) ကို စ တာက ညနေ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်မှာပါ။ သူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံက . .
ရှေ့ဆုံးတန်း – ဒိုင်းတွေ ကိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ ရှိတယ်။
ဒုတိယတန်း – မီးသတ်ဆေးဗူး ကိုင်ထားသူ / ရေစိုဝတ် ကိုင်ထားသူ / coca cola ဗူးနဲ့ ရေဗူးတွေ ကိုင်ထားသူတွေ။ နောက်မှာတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ ရှိတယ်။ တော်တော်များများက mask တွေ မျက်လုံးအကာတွေ ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းထားကြတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေ နောက်မှာ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေက လုံခြုံရေးအတွက် စောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်။
⭕ အားသာချက်တွေက ⭕
➡️ ရဲတွေ အတင်း မဝင်ရဲတော့ဘူး။
➡️ မျက်ရည်ယို ဗုံးကို မီးသတ်ဆေးဗူးနဲ့ တန်း ဖြန်းလိုက်တာနဲ့ အရှိန်သေသွားမယ်။
➡️ အဲ့မှာ မျက်စိ စပ်သွားတဲ့သူတွေကို coca cola နဲ့ မျက်နှာသစ် ခိုင်းတယ်။ ရေနဲ့ ပြန်သစ်တယ်။ ချက်ချင်း သက်သာသွားတယ်။
➡️ သူတို့ဘက်က ဒီ လူအုပ်ကို လွယ်လွယ်ဖြိုခွင်းလို့ မရတော့ဘူး။ လူတွေက စနစ်တကျ defense အပြည့်နဲ့ ဆန္ဒပြတာ ဖြစ်သွားတယ်။
➡️ အကယ်လို့ ဟိုဘက်က အတင်းတက်လာရင် ပြေးလို့ရအောင် ရပ်ကွက်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ထွက်ပေါက်လမ်းတွေ ရှာထားပြီးသား။ တစ်ချို့ရဲတွေက ကားတွေကြားကနေ ပုန်းပြီး တက်လာပြီး မျက်ရည်ယိုဗုံး လာပစ်တယ်။ အဲ့တာတွေကိုပါ ရပ်ကွက်က ဝိုင်းကြည့်ပေးတယ်။ အကယ်လို့ တကယ်ပဲ ပြေးလွှားရတော့မယ်ဆို ပြေးလို့ရအောင် ရပ်ကွက်က လမ်းပြပေးတယ်။ အိမ်တွေက ကူညီပြီး ခေါ်ထားပေးတယ်။
➡️ ဒီတော့ တစ်ချိန်လုံး လူစုခွဲ ပြန်ကြပါတော့ဆိုပြီး လုပ်တဲ့ သူတွေလည်း ဘာမှ သိပ် မပြောနိုင်တော့ဘူး။ တကယ် သတ္တိရှိတဲ့သူတွေက နောက်ဆုံးအချိန်ထိ တောင့်ခံခဲ့နိုင်ကြတယ်။ အဖမ်းအဆီးရှိပေမယ့်ဝရုန်းသုန်းကား အခြေအနေ မဟုတ်တော့တာမို့ နောက်ပိုင်း ဘယ်သူမှ အဖမ်း မခံရတော့ဘူး။
သတိကြီးကြီး ထားစရာ အချက်လည်း သိခဲ့တယ်။ defense ကောင်းကောင်းနဲ့ လူအုပ်စုကို ဖြိုခွဲဖို့ ရဲကားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ အနောက်လမ်းက ဝင်ချ လာတာပါပဲ။ ရှေ့မှာ ရဲက နည်းသွားပြီ။ ဒါမယ့် နောက်ကနေ တပ်အကူတွေ ရောက်လာတာ။ ကံကောင်းချင်တော့ လူစုခွဲပြီးသား ဖြစ်နေတော့ အပြန်မှာပဲ တွေ့တော့တယ်။
ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်ရရင် ဗားကရာလမ်း တိုက်ပွဲက မနက်တစ်ပိုင်းလုံး ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ပေမယ့် နေ့လည် နောက်ပိုင်း တစ်ပိုင်းလုံးမှာတော့ အတော်လေး စနစ်ကျသွားတယ်။ အားနည်းချက်တွေတော့ ရှိသေးတာပေါ့လေ။ မနက်ဖြန် အပါအဝင် နောက်ရက်တွေမှာ ဗားကရာလမ်းပေါ်က ဆန္ဒပြပွဲ ထက် ပိုကောင်းတဲ့ formation တွေနဲ့ defense တွေနဲ့ ဆန္ဒပြနိုင်ကြဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်လို ဖြစ်ညား ဒီစာကို ရေးလိုက်ပါတယ်
ဆန်ဒပွကွသူတှကေို ကာကှယျဖို့ Defense တညျဆောကျခွငျး နှငျ့ ဗားကရာလမျးပျေါက သငျခနျးစာ ! ဒီနေ့ ဗားကရာလမျး ဆန်ဒပွပှဲမှာမနကျတဈပိုငျးလုံးကတော့ ဆန်ဒပွသူတှေ လုပျကွတာက လူစုပွီး အျောမယျ။ ရဲတှေ ပွေးတကျလာရငျ ပွေးမယျ။ ရဲတှေ ငွိမျသှားရငျ လူပွနျစုမယျ။ ဆကျအျောမယျ။ ဒါကိုပဲ ထပျခါ ထပျခါ လုပျသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ လူထု ခံစဈ (defense) ကို စ တာက ညနေ ၂ နာရီ ဝနျးကငျြမှာပါ။ သူတို့လုပျတဲ့ပုံစံက . .
ရှဆေုံ့းတနျး – ဒိုငျးတှေ ကိုငျတဲ့ လူငယျတှေ ရှိတယျ။
ဒုတိယတနျး – မီးသတျဆေးဗူး ကိုငျထားသူ / ရစေိုဝတျ ကိုငျထားသူ / coca cola ဗူးနဲ့ ရဗေူးတှေ ကိုငျထားသူတှေ။ နောကျမှာတော့ ဆန်ဒပွသူတှေ ရှိတယျ။ တျောတျောမြားမြားက mask တှေ မကျြလုံးအကာတှေ ဦးထုပျတှေ ဆောငျးထားကွတယျ။ ဆန်ဒပွသူတှေ နောကျမှာ ရပျကှကျလူကွီးတှကေ လုံခွုံရေးအတှကျ စောငျ့ကွညျ့ပေးနတေယျ။
⭕ အားသာခကျြတှကေ ⭕
➡️ ရဲတှေ အတငျး မဝငျရဲတော့ဘူး။
➡️ မကျြရညျယို ဗုံးကို မီးသတျဆေးဗူးနဲ့ တနျး ဖွနျးလိုကျတာနဲ့ အရှိနျသသှေားမယျ။
➡️ အဲ့မှာ မကျြစိ စပျသှားတဲ့သူတှကေို coca cola နဲ့ မကျြနှာသဈ ခိုငျးတယျ။ ရနေဲ့ ပွနျသဈတယျ။ ခကျြခငျြး သကျသာသှားတယျ။
➡️ သူတို့ဘကျက ဒီ လူအုပျကို လှယျလှယျဖွိုခှငျးလို့ မရတော့ဘူး။ လူတှကေ စနဈတကြ defense အပွညျ့နဲ့ ဆန်ဒပွတာ ဖွဈသှားတယျ။
➡️ အကယျလို့ ဟိုဘကျက အတငျးတကျလာရငျ ပွေးလို့ရအောငျ ရပျကှကျနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ထှကျပေါကျလမျးတှေ ရှာထားပွီးသား။ တဈခြို့ရဲတှကေ ကားတှကွေားကနေ ပုနျးပွီး တကျလာပွီး မကျြရညျယိုဗုံး လာပဈတယျ။ အဲ့တာတှကေိုပါ ရပျကှကျက ဝိုငျးကွညျ့ပေးတယျ။ အကယျလို့ တကယျပဲ ပွေးလှားရတော့မယျဆို ပွေးလို့ရအောငျ ရပျကှကျက လမျးပွပေးတယျ။ အိမျတှကေ ကူညီပွီး ချေါထားပေးတယျ။
➡️ ဒီတော့ တဈခြိနျလုံး လူစုခှဲ ပွနျကွပါတော့ဆိုပွီး လုပျတဲ့ သူတှလေညျး ဘာမှ သိပျ မပွောနိုငျတော့ဘူး။ တကယျ သတ်တိရှိတဲ့သူတှကေ နောကျဆုံးအခြိနျထိ တောငျ့ခံခဲ့နိုငျကွတယျ။ အဖမျးအဆီးရှိပမေယျ့ဝရုနျးသုနျးကား အခွအေနေ မဟုတျတော့တာမို့ နောကျပိုငျး ဘယျသူမှ အဖမျး မခံရတော့ဘူး။
သတိကွီးကွီး ထားစရာ အခကျြလညျး သိခဲ့တယျ။ defense ကောငျးကောငျးနဲ့ လူအုပျစုကို ဖွိုခှဲဖို့ ရဲကားတှေ အလုံးအရငျးနဲ့ အနောကျလမျးက ဝငျခြ လာတာပါပဲ။ ရှမှေ့ာ ရဲက နညျးသှားပွီ။ ဒါမယျ့ နောကျကနေ တပျအကူတှေ ရောကျလာတာ။ ကံကောငျးခငျြတော့ လူစုခှဲပွီးသား ဖွဈနတေော့ အပွနျမှာပဲ တှတေ့ော့တယျ။
ဆိုတော့ အနှဈခြုပျရရငျ ဗားကရာလမျး တိုကျပှဲက မနကျတဈပိုငျးလုံး ဖရိုဖရဲ ဖွဈပမေယျ့ နလေ့ညျ နောကျပိုငျး တဈပိုငျးလုံးမှာတော့ အတျောလေး စနဈကသြှားတယျ။ အားနညျးခကျြတှတေော့ ရှိသေးတာပေါ့လေ။ မနကျဖွနျ အပါအဝငျ နောကျရကျတှမှော ဗားကရာလမျးပျေါက ဆန်ဒပွပှဲ ထကျ ပိုကောငျးတဲ့ formation တှနေဲ့ defense တှနေဲ့ ဆန်ဒပွနိုငျကွဖို့ အထောကျအကူ ဖွဈလို ဖွဈညား ဒီစာကို ရေးလိုကျပါတယျ
ရွှေမန္တလေးသားတွေဆီက သင်ယူရမယ့် သင်ခန်းစားတစ်ခု
အ သက် ပေး ခဲ့ ရ သူ တွေ အ တွက် ဝမ် နည်း ကြေ ကွဲ ရင်း မောင်းခလုတ်ကို မဆွဲခင် ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်း အရင်စဉ်းစားဖို့ပြောလိုက်တဲ့ အောင် လ အန် ဆန်